को हुन् प्रदेश ६ का... :: भानुभक्त :: Setopati
को हुन् प्रदेश ६ का ६ मन्त्री?
दिपकजंग शाही सुर्खेत, फागुन ९
प्रदेश नम्बर ६को सरकारले पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको मन्त्रिमण्डलमा ६ जना मन्त्री छन्। उनको मन्त्रिमण्डलमा २ जना माओवादी केन्द्र र ४ जना एमालेबाट मन्त्री बनेको छन्।
केन्द्रीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति भएका प्रकाश ज्वालादेखि पहिलो पटक प्रदेश सभा जितेका व्यक्ति शाहीको मन्त्रिमण्डलमा अटाएका छन्।
नरेश भण्डारी : आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री
जुम्लाको गोठिचौर गाउँपालिका ५ कुम्डी गाँउमा जन्मिएका हुन्। उनी राजनीति शुरु गर्नुअघि इन्जिनियर थिए।
नोकरी छोडेर उनले २०५१ सालबाट राजनीति सुुरु गरेका हुन्। भण्डारीको राजनीति तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीबाट सुरु भएको हो। माओवादीको सशस्त्र युद्धमा भूमिगत भएका भण्डारी पार्टीको जिल्ला ईन्चार्ज हुँदै विभिन्न जिम्मेवारीमा काम गरेका थिए।
भण्डारी नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य तथा पार्टी निकट नेपाल राष्ट्रिय बुद्धीजिवी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्। २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनबाट पनि भण्डारी सांसद निर्वाचित भए। प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भण्डारी जुम्लाको प्रदेश (क) बाट निर्वाचित भएका हुन्।
उनले पश्चिम नेपालको स्वास्थ्यको धरोहर मानिने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको स्थापनामा भूमिका निर्वाह गरेका छन्।
प्रकाश ज्वाला: आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री
२०६२/०६३ को आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका उनले विभिन्न संघ÷संस्थामा रहेर काम गरेका छन्। अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मको जिम्मेवारी लिएर लामो समय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय ज्वाला १० वर्ष नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सल्यानको सचिव बनेका थिए।
विमला केसी : भूमि, व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री
मन्त्री विमला केसी २०३५ मंसिर २ गते रुकुम (पश्चिम) को सानीभेरी जन्मिएकी हुन्। राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत उनी कानुन संकायतर्फ पनि स्नातक अध्ययन गरिरहेकी छन्।
विमलाले ११ वर्षदेखि नै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन्। २०४६ सालमा तत्कालीन माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनको सदस्यता लिएर उनले राजनीति सुरु गरेकी हुन्।
उनी पार्टीभित्रको विद्यार्थी संगठन, महिला संगठन र कलाकार समूहको एकैपटक अध्यक्ष भएकी थिइन्। त्यसैक्रममा उनी पार्टीको गाउँ जनसरकारप्रमुख समेत भइन्।
२०६४ सालमा पनि संविधानसभा सदस्य बनेकी केसीले अन्तरिम संविधान निर्माणमा समेत भूमिका निभएकी थिइन्। उनी हाल माओवादी केन्द्रको पोलिटव्यूरो सदस्य हुन्।
दल रावल : सामाजिक विकास मन्त्री
२०२८ असार २८ गते हुम्ला साविकको सायाँ–४ मा जन्मिएका रावलले समाजशास्त्रमा एमएसम्मको अध्ययन गरेका छन्।
२०४४ सालबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका रावल सुरुमा तत्कालीन (एकता केन्द्र) मसालका पार्टी सदस्य बने। जनआन्दोलन २०४६ मा पनि सहभागी भएका रावल २०४९ सालमा अनेरास्ववियु सानोठिमी क्याम्पस भक्तपुरको सचिव बनेका थिए। उनी सोही विद्यार्थी संगठनको भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष समेत बने।
करिब ६ वर्ष सामाजिक विकास क्षेत्रमा काम गरेका रावल ‘हिमालय कन्जरभेसन एण्ड डेभलपमेन्ट एशोसियसन’ हुम्लाका संस्थापक सदस्य हुन्। उनी गैरसरकारी संस्था महासंघको केन्द्रीय सचिव, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संगठनको सदस्यजस्ता पदमा रहेर रावलले काम गरिसकेका छन्।
२०६३ सालदेखि नेकपा एमालेको सदस्यता पाएका रावलले पार्टीभित्र संगठन विस्तारदेखि सञ्चालनसम्मको काम गरेका छन्। उनी २०६४ देखि २०६९ सम्म नेकपा एमाले हुम्लाको जिल्ला कमिटी सदस्य थिए। २०६५ देखि २०६९ सम्म पार्टीको केन्द्रीय सामाजिक विभाग सदस्य बनेका थिए २०६९ मा उनी एमालेको हुम्ला जिल्ला अध्यक्ष भए।
२०७० सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा रावल पराजित भएका थिए। उनी यस पटकको प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रदेशसभा (क) बाट सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।
नन्दसिहं बुढा : उद्योग, पर्यन, वन तथा वातावरण मन्त्री
डोल्पाको दुनै गाविस–३ मा २०३२ सालमा जन्मिएका मन्त्री बुढाले २०४८ सालबाट राजनीति सुरू गरेका हुन्। माध्यमिक तहको पढाइ सकिएपछि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न उनी काठमाडौं गए।
उनी करारमा जिल्ला अस्पताल डोल्पाको ल्याब टेक्निसियन बने। अस्पतालको करार सकिएपछि गैरसरकारी संस्थामा काम गर्न थाले। आफैं पढेको डोल्पाको सदरमुकामको सरस्वती माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षा भएर उनले ८ वर्ष काम गरे।
२०६३ एमालेको डोल्पा जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका बुढा २०७० सालमा भएको पाँचौं जिल्ला अधिवेशनबाट सचिव बने। उनी प्रदेशसभाको निर्वाचनमा डोल्पाको प्रदेश सभा (क) बाट निर्वाचित् सांसद् हुन्।
खड्कबहादुर खत्री : भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री
२०२२ मंसिर २० गते सुर्खेतको रानिवास–७ (हालको चिङ्गाड गाउँपालिका २) मा जन्मिएका खड्क खत्री आफूसहित ४ भाइ र ६ बहिनीमध्येका जेठा हुन्। खत्रीले आइएसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन्।
परिवारसहित जन्मस्थानबाट साविकको रामघाट गाविसमा बसाई सरेका खत्रीले २०३५ सालबाट अखिल पाँचौको प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीति सुुरु गरे। २०४३ सालमा गाविस अध्यक्षका लागि जनपक्षीय उम्मेदवार बनेका थिए र त्यसमा पराजित भए।
उनी २०४९ र २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट साविकको रामघाट गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनी सुर्खेत क्षेत्र नं. १ (ख) बाट सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।
सामाजिक तथा राजनीतिक कार्यमा सक्रीय रहेका खत्री भलिबल र एथ्लेटिक्सका पूर्वराष्ट्रिय खेलाडी हुन्।
निर्माण व्यवसायीका रूपमा परिचित खत्री नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको केन्द्रीय सदस्य हुन्। नेकपा एमाले निकट नेपाल उद्योग परिषद्का केन्द्रीय सदस्य हुन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फागुन १०, २०७४, ०१:३०:०१